Fipoahana vata fampangatsiahana :: Olona efatra tsy nahatsiaro tena sempotry ny entona simika • AoRaha
Fipoahana vata fampangatsiahana Olona efatra tsy nahatsiaro tena sempotry ny entona simika
Maherin’ny roa­polo ireo olona naratra vokatry ny fipoahan’ny vata fampangatsiahana iray tao amin’ny faritra Seimad, any Nosy-Be, tamin’ny alin’ny 18 septambra lasa teo. Voa mafy ny efatra tamin’ireo andian’olona ireo satria sempotry ny entona simika. Tsaboina ao amin’ny hopitalibe any an-toerana avokoa ireo maratra.
Tsy fantatra izay antony nahatonga io fipoahan’ny vata fampangatsiahana iray io, afak’omaly alina, tokony ho tamin’ny 10 ora. Mponina tao amin’ny trano nisy an’ilay vata ireo tsy nahatsiaro tena avy hatrany ireo, taorian’ny fipoahana. Tonga hatrany
amin’ireo mponina teo amin’ ny manodidina ny entona simika tao anatin’ilay vata ka izay no voalaza fa nahavoa ireo olona am-polony maro lasibatra, araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
“Tsy misy ahiana ny ain’ ireo niharam-boina rehetra hatreto. Mihatsara ny fivoa­ran’ny toe-pahasalaman’ireo olona rehetra rehefa nahazo ny fitsaboana tao amin’ny hopitalibe. Araka ny fahitan’ ny mpitsabo an’ireo maratra dia ahiana ho entona amôniaka no nahasempotra an’ireo olona ireo. Nisy tamin’ireo lasibatra no afaka nihazo ny tokantranony androany”, hoy hatrany ny loharanom-baovao avy any Nosy-Be. Nanampy betsaka an’ireo olona narary ny fahatongavan’ireo mpitsa­bo maro haingana tao amin’ ny hopitalibe, vantany vao nigadona tao izy ireo. Voaray araka ny tokony ho izy avokoa izy rehetra. Ora vitsy taorian’ izay dia afaka nody ny sasany tamin’ireo marary, araka ny fitantaran’ireo mponina any an-toerana.